'झापड'ले तात्यो तालनगरी, भ्रस्टाचारको मुद्दा लगाएर एन्फा अध्यक्ष मिलनलाई फँसाउने मनाङेको चेतावनी
गण्डकी प्रदेश सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले एन्फा कास्की अध्यक्षमाथि झापड हानेको विषयले यतिखेर तालनगरी तातेको छ ।
पोखराको लेखनाथमा मंगलबार शुरू भएको गण्डकी प्रदेशस्तरी मुख्यमन्त्री कप लिग फुटबल प्रतियोगिता–२०७६ मा आयोजक एन्फा कास्की अध्यक्ष मिलन गुरुङमाथि मनाङेले हातपात गरेका थिए ।
घटनाको भोलिपल्ट बुधबार दुवैले पोखरामा छुट्टाछुट्टै पत्रकार सम्मेलन गरी आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रे । बिहान एन्फा अध्यक्ष गुरुङले आफूमाथि बिनाकारण हातपात भएको भन्दै सांसद मनाङेविरुद्ध कानुनबमोजिम जाने चेतावनी दिँदा साँझ सांसद मनाङेले पत्रकार सम्मेलन गरी एन्फा अध्यक्षले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘ठगलाई मैले झापड नहानेर माला लगाइदिउँ ? यस्तो मान्छेलाई तपाईहरुले पनि झापड हान्ने हो, मैले पनि हान्ने हो ।’
झापड हानेको विषयमा बढी चर्चा भएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले झापड हानेको विषय आफूलाई निकै राम्रो लागेको दाबी गरे । ‘झापड हानेको तपाईहरुलाई मन परेन ? राम्रो कुरा हो । तपाईहरु गान्धीतिरको हुनुहुँदो रहेछ, म चाँहि रावणतिर परे,’ उनले भने, ‘तपाईलाई नराम्रो लागेको छ भने लेख्नोस् न यार ।’
एन्फा अध्यक्षले आफूविरुद्ध उत्रिए आफूले पनि ठगीका दर्जनौं मुद्दा दिएर फसाउन सक्ने सांसद मनाङले चेतावनी दिए ।
सांसदद्वारा आयोजक अध्यक्षमाथि नै मुक्का प्रहार हुनुको मुख्य कारण भने खेलाडी व्यवस्थापनमा चासो नभएको भनिएको छ ।
सांसद मनाङेले प्रतियोगितामा मनाङबाट भाग लिएको टिमको खानपान, बसोबास तथा खेल तयारी व्यवस्थापनमा एन्फा कास्की अध्यक्षले चासो नदिएको हुँदा मुक्का हानेको बताएका छन् ।
यता, एन्फा कास्की अध्यक्ष मिलन गुरुङले पत्रकार सम्मेलनमा गेम बिफोर (अगाडि) र गेम अफ्टर (पछाडि) एक दिनको व्यवस्थापन गर्न सकिने तर एक साताअघि देखि आफूहरुले टिमको लागि खर्च गर्न नसक्ने बताए । खेलका लागि मनाङको टोली गतसाता नै पोखरा आएको थियो । जबकि उसको खेल बुधबार (आज) मात्र थियो ।
लेखनाथको भण्डारढिक खेल मैदानमा मंगलबार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले खेल उद्घाटन गरेका हुन् । ९ टिमले भाग लिएको प्रतियोगितामा विजेताले ५ लाख र उपविजेताले ३ लाखसहित ट्रफि मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन् ।
गण्डकीमा पहिलो पटक भएको मुख्यमन्त्री कपको लागि प्रदेश सरकारले ४० लाख दिने आश्वासन दिएको खेल संयोजक कृष्ण थापाले जानकारी दिए ।
भर्चुअल माध्यमबाट ल्याइयो बजेट
अरनिको राजर्मागमा अवरुद्ध सडक खुलाउन कठिनाइ